192.168.1.1 Ikhasi Lokungena Ngemvume, Igama lomsebenzisi, Iphasiwedi yakho kanye nokuhlela Wireless
router Ngemvume, Misa kabusha, Iphasiwedi, Ikheli le-IP Yokuxhumana
Disemba 7, 2018 http192168111com
192.168.1.1 || Yini-ke nokuthi Indlela Ngemvume?
I 192.168.1.1 ikheli le-IP lalisemzileni ezizenzakalelayo iningi imizila engenawaya ADSL modems. Kukhona futhi eziningi le-IP iyahanjiswa yilo Ikheli le-IP. Ngokuyinhloko, 192.168.l.l yisona esikhulunywa abantu abaningi ikheli elilodwa IP yaziwa nangokuthi amakheli aphethe. 10.0.0.1 noma 192.168.0.1 futhi ezinye inketho can umzila ikheli le-IP.
Yini engenziwa ne 192.168.1.1?
Ngosizo 192.168.1.1 ikheli le-IP, uvunyelwa ukufinyelela umzila wakho. Nokho, udinga ukufinyelela olusemthethweni router admin iphaneli yabo. Ukuze wenze kanjalo, udinga ugcwalise 192.168.1.1 yekheli yesiphequluli sakho. Ngemva ufinyelela olusemthethweni router admin iphaneli, uvunyelwa ukuze ulungise izinketho eziningana mayelana IP Qos, LAN, WAN, DNS, proxy, ukuphathwa inethiwekhi, izilungiselelo WLAN, ongakhetha yezokuphepha, i-WPS, DSL, PPPOE, MAC, futhi DHCP.
Nokho, ukufinyelela olusemthethweni router admin iphaneli, kumele 192.168.1.1 Ngena ngemvume okokuqala. Ngakho, uma ufuna 192.168.1.1 Ngena ngemvume ukuze ufinyelele esemthethweni router admin iphaneli, ke sicela uhlole okuthunyelwe ezilandelayo.
Zonke izinyathelo ezidingekayo ukuze 192.168.1.1 Ngena ngemvume ezibekwe ngezansi. Sicela ulandele okukhulunywe ngezansi igxathu negxathu isiqondiso ngokufanele ukuze Ngena ngemvume 192.168.1.1 ngempumelelo.
In the isinyathelo sokuqala ngqa, Uhlobo http://192.168.1.1 yekheli yesiphequluli sakho ukuze ungene ku-router yakho.
Manje, Faka yakho eqotho lomsebenzisi nephasiwedi ukungena ngemvume ku-router yakho.
Ngemva ufinyelela olusemthethweni router admin iphaneli noma 192.168.1.1 Ngena ngemvume, uvunyelwa ukuze ulungise izinketho eziningana mayelana IP Qos, LAN, WAN, DNS, proxy, ukuphathwa inethiwekhi, izilungiselelo WLAN, ongakhetha yezokuphepha, i-WPS, DSL, PPPOE, MAC, futhi DHCP.
Kusemqoka ukunikeza igama lomsebenzisi nephasiwedi bangempela. Ngakho, ngaphambi kokuthuthela inqubo ngemvume, sicela uqinisekise ukuthi unayo igama lomsebenzisi bangempela futhi iphasiwedi ukufinyelela iphaneli router admin.
Uma ungakhumbuli igama lomsebenzisi nephasiwedi imininingwane yakho, landela imiyalo engezansi.
Kusemqoka ukunikeza igama lomsebenzisi nephasiwedi bangempela. Ngakho, ngaphambi kokuthuthela inqubo ngemvume, sicela uqinisekise ukuthi unayo igama lomsebenzisi nephasiwedi bangempela. Uma ungenalo ukukhumbula igama lomsebenzisi nephasiwedi imininingwane yakho, landela imiyalo engezansi.
Uma ungazi igama lakho lomsebenzisi nephasiwedi futhi kwase kushintshile lomsebenzisi nephasiwedi kuze kube manje, uma uqeda zama ukuthola nabo ilebula kanye nenombolo futhi ngemvume serial ikheli router sika.
Uma u ushintshe iphasiwedi yakho bakhohlwa ke kuzodingeka ukuthi kabusha router noma imodemu kumasethingi factory. Kukhona ukusetha kabusha inkinobho ezifihliwe gcwele hlobo of router wireless noma ADSL imodemu. Ukuvula router emuva kuzilungiselelo factory, udinga ubambe inkinobho for 10 imizuzwana kusetshenziswa inaliti noma lokuvungula.
Ungakwazi ukungena ngemvume ku-router yakho ngokuhlola lomsebenzisi nephasiwedi ohlwini okukhulunywe ngezansi.
Uma ungazi igama lakho lomsebenzisi nephasiwedi futhi kwase kushintshile lomsebenzisi nephasiwedi kuze kube manje, uma uqeda zama ukuthola nabo okukhulunywe ngezansi ilebula kanye nenombolo futhi ngemvume serial ikheli router sika.
Router IP ADDRESS, WEHLULEKA USERNAME, KANYE IPHASIWEDI:
10.1.1.1 (ayikho) MiniAP
Ngakho, abangane, lokhu yikho ngase wabelane kanjani lapha igxathu negxathu isiqondiso mayelana Indlela 192.168.1.1 Ngena ngemvume ukuze ufinyelele esemthethweni router admin iphaneli futhi kanjani ukuthola iphasiwedi kanye lomsebenzisi uma wayeshonelwe igama lakho lomsebenzisi nephasiwedi uma.
Nokho, uma you fanele phi khonondo ne 192.168.1.1 Inqubo Ngemvume, sicela wabelane imicabango yakho nathi.